Indonezia · Aogositra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Indonezia · Aogositra, 2018
Tantara mikasika ny Indonezia tamin'ny Aogositra, 2018
Singapaoro29 Aogositra 2018
Mankalaza ny Eid ul-Fitr araka ny fomban'ny bilaogera
Mediam-bahoaka21 Aogositra 2018
(Marihina fa tamin'ny 3 Novambra 2006 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Mbola niresaka momba ny Eid ul-Fitr ireo bilaogera Indoneziana sasany, na ny zavatra nifandraika tamin'izany, andro maro taty taoriana noho ny antony samihafa. Agus Setiawan ao amin'ny Blogonesia, ohatra, dia niresaka momba ny fatwa (didy ara-pivavahana) nataon'ny Nahdlatul Ulama...
Fanoherana18 Aogositra 2018
Raha nijery ny CNN na ny BBC ianao nandritra ny fitsidihan'i Bush tany Indonezia dia mety nahita ny mpanao fihetsiketsehana marobe tao an-drenivohitr'i Indonezia, Jakarta niaraka tamin'ny teny filamatra manohitra an'i Bush na raha ny marimarina kokoa dia manohitra ny politikan'ny raharaham-bahiny Amerikana.
Ny bilaogin'ny Ministra Indoneziana iray hafa sy ny herinandro fisaonana
Singapaoro17 Aogositra 2018
Araka ny nosoratako tato , ny Minisitry ny Fampialofana Indoneziana Yusuf Asy'ari no lasa Minisitra faharoa nanomboka nibilaogy taorian'ny Minisitry ny Fiarovana Juwono Sudarsono namahana bilaogy volana vitsivitsy talohan'izay. Nosoratany tamin'ny fiteny Anglisy sy Bahasa Indonesia ny bilaoginy.
Bilaogy manokana ho an'ny horohorontany tany Indonezia
Mediam-bahoaka14 Aogositra 2018
Nampihetsi-po ny fanampiana sy ny fanomezana avy amin'ny firenena manerantany tamin'ny horohorontany nahatratra 6,2 tamin'ny maridrefy richter nitranga tao Yogyakarta, Java Afovoany, Indonezia.